N ingbo Shuangyu (Samewe), dị ka otu n'ime thefamous kọmputa Ewepụghị Knitting Machine Nsukka, ọ bụghị nanị na-eche banyere nke ukwu na anyị na-emepụta ma na-na àgwà, anyị nwere investedquite abig ego na advancedprocessing equipments aka machinequality. Anyị na-arụ ọrụ ọzụzụ kpọrọ iji hụ ma melite ngwaahịa mma.
SY52-S bụ echekwa na ihe igwe ahaziri maka ourclients. Ọ nwere uru ndị ezi uche price, anụ quality andthe mkpụmkpụ-okwu recouping nke isi obodo outlay.The igwe adpots n'ụzọ zuru ezuna kọmputa na-achịkwa usoro maka ebufe, tucking na quickerajụjụ na-alọta nakwa dị ka moto akara usoro maka colorchanging. Ọ na-enye anụ arụmọrụ ma elu na-agba naoji na ukwuu ọrụ, dị ka intarsia, larịị sticth, ọma-ezi, cable akụkụ, cross-stitch, Jacquard na ect.
SY52-2S adpots otu erughị ala ọma agịga mmanya na sọrọ rackingfor Ntụ agịga mmanya, elu-ọsọ nloghachi n'ụzọ dị irè na-amụba thekitting ọsọ site 20% -30%. Abụọ nke grippers na ọnwụ
pụtara n'ụzọ dị irè belata mmefu yarn ma melite productivity.This usoro bụ useddigital technology iji nweta ihe nakawa etu esi oftransfer, Tuck, pointelle, intarsia, Jacquard, o shaping, zoro ezo shaping na ndị ọzọ mgbe nile ụkpụrụ kitting ọrụ, ọ alsocan ikpa efe oge ufodu multi-acha Jacquard, intarsia, USB na pointelle Ọdịdị nakawa etu esi.
SY52-3S adpots otu erughị ala ọma agịga mmanya na sọrọ rackingfor Ntụ agịga mmanya, elu-ọsọ nloghachi n'ụzọ dị irè na-amụba thekntting ọsọ site 20% -30%. Abụọ nke grippers na ịcha n'aka n'ụzọ dị irè belata mmefu yarn ma melite arụpụtaghị. Nke a na usoro a na-eji dijitalụ technology iji nweta ihe nakawa etu esi nke nyefe, Tuck, pointelle, intarsia, Jacquard, o shaping, zoro shaping na ndị ọzọ mgbe nile ụkpụrụ akpa ọrụ, ọ na-ike ikpa efe oge ufodu multi-acha Jacquard, intarsia, USB na pointelle Ọdịdị nakawa etu esi .
" Good quality, Good ọrụ " bụ mgbe anyị echiche na Credo. Anyị na-etinye mgbalị nile ịchịkwa àgwà, ngwugwu, kwudịrị etc na anyị QC ga-elele bụla zuru ezu n'oge na-amị, na n'iru Mbupu. Anyị dị njikere igosi ogologo azụmahịa mmekọrịta ndị na-achọ elu àgwà ngwaahịa na ezi ọrụ. Anyị ụlọ ọrụ kwekọrọ na mmụọ nke "ọhụrụ, kwekọrọ, otu ọrụ na nkekọrịta, ụzọ ụkwụ, pragmatic ọganihu". Inye anyị ohere na anyị ga-egosi na anyị na ike.